Zhejiang Senling ọgba tum tum Co., Ltd.
E hiwere Zhejiang Senling Motorcycle Co., Ltd. na 2016 ma dị na Taizhou City, Province Zhejiang, China, na naanị 5km site na ọdụ ụgbọ elu Taizhou Luqiao. Anyị na -emepụta skuuta sitere na skuuta mmanụ ruo skuuta eletrik. Ngwaahịa a niile na -ere nke ọma n'ụlọ na mba ofesi. Ike mmepụta kwa afọ anyị nwere ike iru karịa ụgbọ ala 100,000.
Anyị nwere ahịrị mgbakọ ụgbọ ala nke anyị, ngalaba ọrụ aka, ụlọ nlele na akụrụngwa nyocha dị elu, nke a na -eji maka usoro nnwale ikuku site na usoro ọnọdụ ọrụ wee hụ na ịdị mma ngwaahịa. Anyị nwekwara ndị ọrụ ọkachamara na ngalaba iji nyochaa usoro njikwa mma niile site na ịhọrọ ihe na ngwaahịa na -ahapụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ọtụtụ afọ nke ịrụ ọrụ dị mma na -eme ka anyị kwenye na ịdị mma bụ ndụ ụlọ ọrụ anyị, na -eme ka anyị na -emeziwanye ọganihu n'ichepụta ihe na ịkwalite akụrụngwa anyị. Ugbu a, anyị nwere ngwaahịa patent anyị ma ka na -etinyekwa onwe anyị na skoo ihe okike.
Reciprocity na mmeri-mmeri bụ ebumnuche ụlọ ọrụ anyị. Uru ndị ahịa bụ ụkpụrụ bụ isi nke mmepụta na ọrụ anyị. Anyị nwere ndị otu ọkachamara na-ere ahịa na-achụ atụmatụ ogologo oge na mmepe na-adigide.
Site na ebumnuche nke "Chọpụta ihe kacha mma", anyị na -elekwasị anya n'idu ụzọ ọhụrụ na mgbanwe nke ngwaahịa ọgba tum tum ahaziri iche, nke nwere ọgụgụ isi na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Anyị na -atụ anya iji ike nke ihe ọhụrụ na teknụzụ iji mee ka ndị na -azụ ahịa gburugburu ụwa nweta ngwaahịa na ọrụ ọgba tum tum ahaziri nke ọma.
N'iburu uru nke ahụmịhe nrụpụta ọgba tum tum ọtụtụ afọ, SENLING abụghị naanị na -agba mbọ iweta ndị ahịa ọ bụla ahụmịhe ọnụ ahịa kacha mma, kamakwa ọ na -enye arụmọrụ ịnya ụgbọ ala kachasị echebara echiche maka onye ọ bụla n'okwu niile.
Ngwaahịa anyị niile na -ezute ISO9001, Ọzọkwa ụfọdụ na -enye nkwado EEC maka Europe, ụfọdụ na -agafe EPA maka America.